November 20, 2008 1:19 PM ET
Washington, DATE \_@ "MMMM d, yyyy" November 20, 2008--On the day Ugandan editor Andrew Mwenda was introduced here as a recipient of a CPJ International Press Freedom Award, police back home summoned the journalist for questioning over his magazine's hard-hitting...
November 17, 2008 3:07 PM ET
New York, November 17, 2008--Authorities should halt harassment of media and human rights lawyer Harrison Nkomo, CPJ said today. Nkomo is awaiting word on whether he will face criminal charges after a client left Zimbabwe in the midst of a...
November 11, 2008 3:24 PM ET
November 2008News from the Committee to Protect Journalists...
Our announcement of the 2008 International Press Freedom Award winners has gotten coverage today, with stories running in the Arab, African, and Asian press. The Philippine-based Pinoy Press has an article about the awardees, and The Zimbabwe Independent reports on...
June 23, 2008 12:00 AM ET
Robert Mugabe's government has jailed reporters without basis, intimidated sources, and obstructed distribution of independent news....
New York, May 9, 2008—In separate cases today, a magistrate court in the Zimbabwean capital, Harare, released from police custody a top newspaper editor and a leading lawyer working in defense of journalists. Both were formally charged, however, according to...
New York, May 8, 2008—Zimbabwean police arrested a top newspaper editor today and released a photographer jailed since Monday, according to local journalists and news reports. The Committee to Protect Journalists remains concerned about the well-being of a leading media...
New York, May 7, 2008—The Committee to Protect Journalists is alarmed by reports that a leading Zimbabwean lawyer working in defense of journalists was arrested today in the capital, Harare. Harrison Nkomo remained in police custody late today after his...